P3d V4 Tabela tafio-drivotra misoroka taorian'ny tsy nahafatesan'i US Nimitz.
fanontaniana P3d V4 Tabela tafio-drivotra misoroka taorian'ny tsy nahafatesan'i US Nimitz.
1 taona 7 volana lasa izay #1076 by jjpamhawk
P3D V4 tenany Indraindray dia mianjera rehefa misy fiaramanidina mitifitra eo am-bala an'ny USS Nimitz. Aorian'ny P3D crash - izaho manomboka P3D V4 (tsy averin'ny PC indray) ny taby 'Add-ons' tsy hita, ka noho izany dia tsy afaka hamerina ny USS Nimitz intsony aho. Ny fomba tokana ahafahana miverina ny tabilao 'Add-ons' dia ny famerenana indray ny solosaina. Tsy mitranga izany amin'ny lozam-piaramanidina rehetra ao amin'ny Nimitz. Mitranga amin'ny simulator mihoatra ny iray izany. Misy soso-kevitra toa ny fomba tokony hametrahana ny mpitatitra fiaramanidina; Misy sosokevitra?
1 taona 7 volana lasa izay #1078 by DRCW
Jereo ny adiresy nampidirinao P3D. Ny fiaramanidina sasany (Freeware dia mety miteraka fiankinan-doha amin'ny programa) Raha toa ka manomboka maimaimpoana ity olana ity aorian'ny fandefasana maimaim-poana, esory izay fanampim-panafana, dia avereno indray ny rafitra ary jereo raha toa ka mitranga izany indray. Ny olan'ny codety dia olana iraisana amin'izao fotoana izao. Ny olana hafa dia midika fa maimaim-poana miaraka amin'ny fiarovana ny aterineto.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: jjpamhawk